Muusow Qaranbaa laguu doortee SNM iyo Qabiil Laguuma Dooran By Fouad Youssouf Osman
Tan iyo markii la doortay madaxwaynaha cusub ee Jamhuuriyada Soomaliland waxaa laga joogaa mudo 50 cisho ah. Tan iyo intii uu xilka la wareegay madaxwaynaha cusub waxaa dalka ka dhacay isbadalo taasi oo ay ugu horayso magacaabista golaha wasiirada Soomaliland. Hadaba qormadan kooban waxaan ku eegidoonaa madaxwaynihii loo doortay qaranka ee shacab Soomaliland laga bilaabo Lowyacado ilaa Taleex ay doorteen filicilada iyo talaabooyinka uu qaaday dhamaan ba waxay lid ku yihiin qaranimada dalka.
Marka laga bilaabo maalintii madaxwaynaha la caleemo saarayey khudbadisii ilaa booqashada uu maanta Djibouti ku joogo madaxwaynaha hadalada afkiisa ka soo yeedhaya iyo ficilada qalinka gacantiisa ku saxeexani waa kuwo qaranimada iyo jiritaanka shacabka Soomaliland dhaawac wayn u gaystay.
Madaxwaynuhu qudbadisii maalintii xilwareejinta uu ka jeediyey qasriga madaxtooyada waxay ahayd mid xanaf ku ah shacabka reer Soomaliland qaar ka mid ah. Madaxwaynuhu waxay ahayd in khudbad shacabka oo dhan taabata uu jeediyo laakiin wuxuu ka bilaabay SNM. Dafirimaayo hadalo wanaagsan oo yadadiilo horumarineed ka turjamaya wuu jeediyey laakiin markuu khudbadiisii SNM iyo waxbay qabatay afkiisa ka soo booday shacab badan oo ka tirsan dadkii codka siiyey inay khudbada iska xireen ayaa macquul ah. Waayo SNM cidna waxbay tartay cidna waxbay yeeshay, madaxwaynuhu hadii uu ku nuuxnuuxsaday in SNM shacabka reer Soomaliland wax tartay. SNM shacabka reer Soomaliland wax mawada tarin, beesha dhexe ee aad adigu ka soo jeedo ayey matalaysay, oo ay u dagaalantay, shacabka darifyada Soomalilandna magaca SNM ayaad wax lagu yeelay. Markaa mudane Madaxwayne SNM inagama dhaxayso, Qaranka Soomaliland taariikhdiisa mawada matali karto kaliya waxay matali kartaa taariikhdaada iyo inta howshaa kugula jirtay iyo dadkii wakhtigaa ay wax u qabatay. Waxaa reer Soomaliland ka dhaxeeyaa waa qaranka iyo wixii aynu yagleelay wixii ka danbeeyey shirkii Boorama.
Maanta madaxwayne qaranbaa tahay shacabka reer Soomaliland ayaa ku doortay, dadka intiisa badan ee ku dooratay wakhtiigii SNM ma joogin oo ay ku jiraan dhalinta beeshaada ka soo jeedaa markaa wax tagay oo taariikh noqday in aad wax jooga ka dhigto mustaqbalka dhalintana ku xaradho waa wax runtii aan lagaa filayn.
SNM waa taariikh duugowday oo raacday dawladii ay la dagaalamaysay ee kacaankii Siyaad Bare, himiladeedu ma ahayn Soomaliland sida magaca ka muuqatay Soomali National Movement. Markaa waxa manta warkeeda aad u baahiso 27 sano ka dib waa war adiga kugu kooban shacabka reer Soomaalilandna kulama qabaan, hadii ay jirto cid kula qabtaana waa nin aan rabin Soomaliland ee raba reero-reerayn iyo kalaqaybin shacab.
Madaxwaynuhu wuxuu ilaa hada magacaabay 41 xil wareegto oo isugu jira Wasiiro, wasiiro ku xigeeno, Agaasimayaal iyo gudoomiyaayaal hayadaha dawliga ah ee madaxbanaan. 41 xil 31 ka mida waxaa qalinka loogu duugay beesha uu madaxwaynuhu ka soo jeedo ee magac iyo aftirsiin ahaanba ay wadagaan.
Mudane madaxwayne maxay tahay shuruucda, qawaantiinta iyo xeerarka aad u cuskatay in beel ka mida mushtamaca aad madaxwaynaha u tahay ee ku doortay in aad ka fadisho oo aad xil kasta oo muhuum ah aad iyaga u cimaamado. Ma dadka kale ayey ka qoon badanyihiin? Ma dadka kale ayey ka xirfad wanaagsanyihiin? Ma xeerka iyo qawaaniinta dastuuriga ah ee dalka u yaala ayaa dhigaya in sidaa wax loo qaybiyo oo kaasi ayaad adeegsanaysaa? Ma lixbaax iyo habardugaag kale ayey isku noqdeen beesha aad qalinka kala daashay iyo kuwan sidii wax tuugsanaya kuu soo fiirinaya? Beesha dhexe beelaha kale Soomaliland may ka xigaan?
Shacabka reer Soomaliland magacay doonaan ha sheegtaa qabiilkay doonan ha ku aftirsadaan waxaan qabaa cid kasta oo caqli leh, cilmi iyo aqoon leh, damiirka saxdiina shaqaynayo in aanay la dhacsanayn sida aad mushtamacii ku doortay ee ku sharfay aad wax ugu qaybinayso.
Madaxwaynuhu wuxu booqashadiisii ugu horaysay ku tagay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti. Halkaasi si wacan oo heer milge iyo maamus leh ayaa loogu soo dhaweeyey waayo waa madaxwayne, waxa uu matalayaa shacab doorasho xor oo xalaal ah ku soo doortay. Doorashadaasi oo taarikhda warbaahinta caalamka bogageeda ugu horeeya lagaga suntay. Madaxwaynuhu markii uu la kulmay shacabka (Jaaliyada) reer Soomaliland ee degen dalka Djibouti oo sifiican oo xushmad iyo maamuus leh u soo dhaweeyey, khudbadii uu halkaasi ka jeediyey wuuxuu ku bilaabay SNM. Dadka intii saxaafada la socotaa way daawadeen wixii uu ka hadlay iyo sidii uu u hadlay in wanaagsan oo loo riyaaqo oo taarikh leh iyo in aan dadka reer Soomaliland wada cajabinba way isugu jirtay.
Mudane madaxwayne miyaad ilowday dadka meesha isugu yimiday badankoodu inaanay taariikhda SNM kula lahayn? Miyaad ilowday shacabkii ugu badnaa ee xadka ka soo talaabay ee kuu codeeyey in aanay ahayn kuwiii SNM wax tartay ee ay u badanyihiin kuwii magaca SNM wax lagu yeelay? Mudane madaxwayne dal shisheeye ayaad joogtee maxaa keenay inaad SNM ku nuuxnuuxsato mawaxaad wayday wax wanaagsan oo aad la wadaagto bulsho waynta nooc walba leh ee meesha isugu timiday?
Doodaydu waxay tahay mudane madaxwayne qaranbaa laguu doortay Soomaliland la yiraahdo ka kooban beelo Soomaaliyeed oo islaayey, isdilay, isdhacay. Laakiin taasi ka gudbay markii lagu dhawaaqay gooni isutaaga Soomaaliland. Maxaa keenay in 27 sano dib aad u noqoto oo naburo la dhayey oo shacabka intiisa badani ka bogsatay, dad badanina ay dhacdooyinkaasi xunxun dabadood dhasheen inaad sidii quraanka u subciso oo aad u muraajacayso. Ma SNM ayaa ku dooratay? Ma SNM ayaa laguu doortay? Maxaa adiga iyo taariikhdaadii hore ee SNM manta oo aad maxadwayne tahay isku ladhay?
Mudane madaxwayne qaran ayaa laguu doortay la yriaahdo Soomaaliland ee laguuma dooran SNM, laguumana dooran beesha aad dhalasho ahaan ka soo jeedo oo kaliya, ee waxaa laguu doortay dhamaan shacabka reer Soomaliland. Shacabka reer Soomaliland waxay kaa rabaan inaad si cadaalad oo eex la’aan ah aad wax ugu qaybiso. Waxay kaa rabaan inaad kala hadasho wax horumarka iyo talaabo horu usocodka Soomaliland khuseeya ee kaagama baahna SNM iyo taariikhdeeda waayo ma tihid macalin taarikhda dhiga.
Mudane madaxwayne mudada kooban ee aad joogto khasriga madaxtooyada shacabka reer Soomaaliland wadajirkeedii qalbiga ayuu ka dhaawacmay, talaabooyinka aad qaadayso shacabku uma wada bogin. Shacabka inbaa yaaban, inbaa wax tabanaysa, inbaa uurka cuqdad aad kaga abuurtay oo aad xasuusinaysaa taarikho hore oo mugdi iyo calool xumo leh.
Mudane madaxwayne dalka waxyaalo fiican oo lagu diirsado waad ka qabatay mudada kooban ee aad joogtay sida in aad magacowday Wasiiro dhalinyaro ah oo aqoon leh wallow qoyskaaga aad u miistay. Waxaa ka mida arinta dhulka dekeda Berbera, waxaa ka mida wasaaradaha aad yaraysay. Laakiin waxbadan oo aanan ku faraxsanayn, reer tolkay ku faraxsanayn, beelaha darifyadu ku faraxsanayn ayaad samaysay waxaanad joogta xafiiska mudo kooban. Mudane madaxwayne dalku wadajir iyo horusocodbuu rabaa adigaana u madaxwayne ah laakiin ogow madaxwaynuhu waa shaqaale shacabku doortay, una doortay in uu u adeego markaa ka ilaali wixii umada iyo shacabka xanaf iyo xin ku abuuraya. Ilaahayna toobada toosan ha ku waafajiyo Amiin.
More in this category: « Waxaa baadhis iyo dabo gal u baahan liisamada iyo xaqul qalinkii 18-ka shirkadood ee dalka batrolka iyo macdanta ka baadha. Soomaaliyeey, Muuse waa kaa… »